Kusvirwa nadriver washefu wandinodanana naye – VanodaZvinhu
Kusvirwa nadriver washefu wandinodanana naye
by DrSviro · June 2, 2015
Ndaive ndabva zvangu mu shower after a long day at work pandakapinda mu bedroom, ndakakanda towel randaive ndakamonera muviri uko, ndikambozviyeva zvangu pagrazi rakareba kunge ini raive kumadziro.
Chokwadi ndaive ndakazvarwa, Beyonce aisara pasi. Ndakabva ndatora ka bhotoro ke body lotion yangu yakabva mhiri kwemakungwa ndikaipuruzira muviri wese ndikabva ndanyatsonzwa kakufefeterwa. Ndakazopedzesa nekumwaya mafuta anonhuwira eChristioan Dior.
Ndapedza ndakabvisa shower cap yangu ndobva bvudzi rangu raisvika muma shoulders rangoyerera nemusana wangu, ndakapfapfaidza mafuta emuvhudzi ndichibva ndagara pachigaro ndichida kukama musoro. Ndipo pakarira buzzer rangu, ndikati ko ndiyaniko iyeye aingouya zvisina appointment. Ndakaenda pa intercom ndokuti, ” Hello!”. Zvikanzi “ndini Amon”.
Amon aive driver washefu vandinomhanya navo . Saka igarotumwa nashefu ku penthouse kwangu kwavakanga vanditengera
muma Avenues pakatarisana nema cricket grounds pedo nekunogara vakuru venyika. Aiuya kakawanda achindivigira ma groceries kana kuzondipika kuti ndinosangana navo kwavanenge vari, sezvo vaisada kunyanyoonekwa semunhu akaroora uye vane chigaro chikuru muhurumende.
Ndakati “Ok, pinda hako” ndichipresa button rekumuvhurira door.Ndakabva ndangokanda kamwe kadhirezi kangu kanogumira pamusoro pemabvi ndichibva ndaenda kunovhura door. Amon akapinda aine box raive rakazara tunhu twemu kitchen twaive twabva mhiri kwemakungwa, ko muno tichazviwanepi imo mangosara mashelf bedzi ukapinda muma
Kutaura chokwadi baba vanondichengeta ivavo, zvinhu zvemumba mangu zvese hamuna kana chinhu chemuno muzimbabwe, kubva ku furniture nezviri mu fridge zvacho, pamwe kunze kwemukaka chete. “Asi pane kwamuri kuenda here nhasi, sisi Monica,” akadaro Amon achibvarura chibhokisi changa chine zvinhu. “Nemhaka yei, kuti wawana ndichigeza here? Hapana zvangu ndiri kuda kutogarira programme yangu iri kutanga na 6 pa DStv apa, saka ndinoda kukurumidza kubika kuti ndisazoipotse”
“Kubva chiregai ndisakunonotsei”, akadaro otonanga kudoor. “Nhai Amon ungaitewo here screw driver, pelmet cover rangu rakarembera pakona apo zvinondibhowa”, ndakanga ndatoti regai apagadzire asati aenda, ko ndinomuwanepi murume angaite twumabasa twepamba, ava shefu vangu vanongouya pakati pousiku chete. “E-e ndinayo, iri mumota”, akapindura akatarisa paida kugadzirwa. “Regai ndiitore mumotikari, mati ndingakusiyei muchiita basa rakadaro ko redu nderei”.
Ndakabva ndaseka zvangu ndikati ” Waita hako, kubva itore ndione kana paine chandingabatsirewo nacho.” Muchinda akabva adzika downstairs ini ndokusara ndichikwira pa coffee table kuti ndinyatsoona paida kuroverwa pacho.
Akadzoka ndisati ndaburuka, ndaitoita zvekesveerera sezvo ka table kaive kapfupi, apa curtain rangu raitobva pa ceiling chaipo. Ndaive ndakanganwa kuti handina kupfeka mukati, pandakati cheu ndikaona munhu akatarisa kumashure kwangu chaiko. Ndakabva ndadzika patable chop chop ndave kunzwa kakunyara ndisingazivi kuti pane chaaona here.
Akabva akwira patable paye asi ndinenge ndakaona pamberi petrauzi rake pakafutirira, kana kuti pamwe ndini ndaive ndongofungidzirawo hangu, hameno. “Sisi hamuna hamugone here kukwira chair mundibatirewo pakona apa ndirovere kapikiri aka kakawira apa, ndiko chete kari kuda kudzorerwa.”
Ndakabva ndatora chair ndikabva ndakwira. Ndakadhonza cover kudaro iye achibva angoti te-te-te kurovera kapikiri kaye pakare. Amon akazoti regai ndibvise kamwe kari nechepakati aka ndirovere pacorner ipapo, kuti panyatsosimba, nekuti ndipo pane basa.
Akazvuva katable kake ndokuuya pandaive ndichiri ndokuti ndinyatsokakata jira kuti risazosara rakaita loose, achibva tanga kutsvaga pakati pfavei pekurovera chipikiri. Ndipo pandakatarisa zvigunwe zvake wanike haiwa ano maziminwe akasimba akareba akasviba kuti ndoo.
Mheno chakapinda mupfungwa dzangu ndikabva ndayeuka nyaya dzataisitaura kumabasa zvichinzi ukaona rume rine mazigunwe ziva kuti rakasenga. Ndakabva ndaswedera kwaiiva nechekumashure zvekuti ndakabva ndamugumha nemagaro angu, iye haana kusuduruka, akangorovera chipikiri anyerere. Patakadzika pasi ndakati regai nditarise
pabhurukwa paye ndikaona zvino, pachinyatsofuta, kwete zvekufungira aiwa. Ndakati “a, asi pane zvamakaviga here mubhurukwa menyu umu nhai mukoma Amon?” “Ndinovigei zvangu nhai sisi, handina kana sendi chairo rekuisa
muhomwe mangu”, akapindura akatarisa parutivi. “Kubva ribvisei tione kuti chii chakazvimba pamberi penyu apo”,
ipapo ndaive ndotomubata bhandi ndatozvipira kuti iwo mazioko akadai aya, regai tione kuti ichokwadi here chekuti vane mazigunwe vahombe.
Ndakakumura bhandi rake ndokuvhura button re tirauzi rake, iye achibva avhura zipi oga. Ndakavhunduka paakadzikisa underwear yake, rakabva rangoti panze puu, rino zimboro zidema, raka circumcizwa. Raive nemusoro muhombe waiita kunge kachibhakera kemwana mudiki, pakati pawo wakaita zvekutsemuka chaizvo zvekuti ndakatomboti chigunwe changu chingangokwana muburi rawo. Ndakabva ndangonzwa kutota pakati pemakumbo nguva imwe chete. Iye zvivindi zvkabva
zvawanda ndokundidhonza kwaakupinza ruoko mukadhirezi kangu achibata zamu, uku rumwe ruri kubata magaro aive akapfava kunge ganda remwana mucheche.
Ini ndakanga ndongobatabata zimboro riya, wanike zimusoro racho rakaoma kuita kunge rine man’a chaiwo. Akaona kushamisika kwangu zvikanzi “Asi hausati wamborara nemunhu akachekwa ganda? Ndizvo zvainoita, pese pandinge ndichifamba inenge ichikwizira paunderwear saka inoomarara. Zvino nhasi uchayuwira, nekuti kana garwe rikapinda mumvura haritoti ipapo, paichazopfava unenge waibva”
Ini akanga atondinonokera, sezvo paive pasina zvekukisana ndakabva ndangomudhonzera mu bedroom, kadhirezi ndichibva ndangokakanda kwakadaro uko. Iyewo patakapinda aive atobvisa shati, ndakazomubatsira kubvisa tirauzi akagara pamubhedha nebhutsu. Apa mboro yake iya yakanga yamira kuita kunge gear stick remumota make ichiritidza kutsamwa zvaityisa, ende iri hobvu chaiyo.
Akabva andibata mapendekete ndokunditendedza zvikanzi fongora wakabata mubheda wako. Ndaive ndakatota hangu asi pakapinda zimusoro racho ndakarwadziwa. Akabva aipinzi half ndokutanga kutambisa magaro age achibaya pa roof yebeche, pane clitoris asi pari nemukati. Ndakamboda kudzorera, ndichipushira magaro kumasure nekuatenderedzawo, asi rume rakabva randiti chiuno dzvi, ndokundidzvanyira pamubhedha zvekuti kana kuzunguzika chaioko
Akakwenya kwemamainitsi anopfuura ten akangodaro, asati aipinza yese, achingoita zvekubaya achidzosera kumasure. Aisakoira achiita zvekukwakura aiwa, aingiotenderedza iripo pandataura. Ndakanzwa heat yopararira nemuviri wangu wese ndikaziva kuti ndotunda. Ndakaridza mhere asi rume harina kumbochinja. Pandakazoti ndakufema zvinenge zviri nani ndipo paakazoiti bvo-o yese, yosvika kuchibereko chaiko. Akatanga zvino kukoira iota semuseve chaiwo
ndikanakirwa zvandisati ndakamboita.
Ipapo akabva atupfunura maoko ake pachiuno changu ndikabva ndatanga kumutambirawo ndikati nhasi tinopedzerana. Ndakarohwa ne angle iyoyi for more than 20 minutes ndichingozhamba kuita kunge pafiwa chaipo.Ndakasverera maoko angu nepasi pedumbu rangu ndikabva ndatsvanzvadzira ndikabata machende ake. Aive akaoma kuti nga akakura kunge mazai achitsvaira kumagaro kwangu.
Ndakaapuruzira ndikanzwa avekudzokera nechemukati. Rume rakadzvova kunge bhuru remombe ndichibva ndanzwa chombo chake kuoma kuti ndi, chaakugwinha gwinha. Akaita kundirovera kamwe zvekuti mabvi angu akasumuka kubva pamubhedha chaipo ndokubva andisunga muchiuno nemazioko ake achibva aoma akadaro. Ipapo ndakabva ndanzwa
kurohwa nenamo yaipisa ichiita kunama kuchibereko chaiko, kunzwa kuti tsa, tsa, ndiye tsa-a-a-a ,tsa-a-a-a. Ini ndaive ndongogomera ndichiyuwira.
Akabva ambowira pamusoro pangu nekumusana kudaro, achibva azoiti zvomo, ndichibva ndati bhi pamubheda ndakatarisa
pasi. Akabva atanga hake kuridza muridzo achipfeka hembe dzake, ini kana nesimba rekusimuka ndakarishaya. Ndakazomuti andibatidzirewo fan ndimborohwa nekamhepo, ndikazonzwa door rovharwa, ndikabva
ndangofa ndakadaro. Ndakatozomutswa ne mosquite kuma past eight sezvo ndaive ndisina kuvhara mahwindo.
Chandakangokwanisa kuita kuvhara mahwindo nekupinda mumagumbeze. Mangwana acho ndakafonerwa nashefu vangu ndiri kubasa, kwaakutondivhunza kuti nhai Amon aka deliver here pasuro yako. Ndakarohwa nehana, zvikanzi aiwa usatye hako, aramba basa nhasi, ati akuda kunogara kuruzevha, saka ndati ndicheke kuti haana kutiza netwuma wine twako twandakamutuma natwo here.
Ndakangoti ehe akaunza pasuru asi hatina kumbonyanyotaura . Ndakabva ndaona kuti pamwe atya kuti tikazobatwa aibva angoiswa mu drum re acid. Asi mwoyo wangu wakarwadzwa. Chokwadi here murume akadaro kubva angondisiya andiita
kamwe chete, ko ndiani aizogona kundibata sezvimwezvo, kundisiira iye mudhara uyu aiswero dya Viagra kuti imire. Kamukomana kanguwo ke paside kaive kotondisvota, basa rekuuya kuflat kwangu kachizondigumha mari, hee hanzi basa redu rekuchinja mari iri mazuva ano zvakapressa.. Apawo kamboro aitokundwa nemwana wemu grade
Ndakasumuka zvangu ndaakuno photo coper bepa randaive ndakabata asi pakati pemakumbo pive pototota nekungonzwa zita rekuti Amon.
Zvino mheno kuti ndichamuwanira kupi murume akadaro.
Dzesviro:Chinoda Kufa Chinovingira, Ndakapindirwa ndichikwesha mukadzi wemunhu
by DrSviro · Published October 15, 2015
by DrSviro · Published December 27, 2015
Nyota iyi, kusvirwa naDelivery Man :Part One
by DrSviro · Published April 21, 2014
Next story Kusvira student yangu ye Economics
Previous story Manakiro anoita kudyiwa mboro neSmall house!